Chengetedzo - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Chenjedzo yekushandisa LCD module
Ndokumbira utarise zvinotevera kana uchishandisa iyi LCD pani
1. Mugadziri ane kodzero yekuchinja
(1). Kana zvisingadzivisike zvinhu, mugadziri ane kodzero yekushandura zvinhu zvisina basa, kusanganisira zvinodzora backlight. (Resistor, capacitor uye mamwe mapasita akasiyana vatengesi vezvinhu zvinogadzira zvinoonekwa zvakasiyana uye mavara)
(2). Iyo inogadzira ine kodzero yekuchinja iyo PCB / FPC / Back mwenje / Kubata Panel ... vhezheni iri pasi pechinhu chisingadzoreke (kuitira kuti isangane neyakagadzika yekupa iyo mugadziri ane mvumo yekugadzirisa iyo vhezheni pasina kukanganisa maitiro emagetsi uye zvimiro zvekunze. )
2. Kuchengetedza kwekuisa
(1). Unofanira kushandisa makona mana kana mativi mana kuisa module
(2). Iyo yekumisikidza chimiro inofanirwa kutariswa kuitira kuti isashandise isina kuenzana simba (senge kumonyanisa kusagadzikana) kune module. Iyo yekumisikidza yekumisikidza mamiriro inofanira kunge iine simba rakakwana kuitira kuti ekunze masimba haazotapurirwe zvakananga kumo module
(3). Ndokumbira unamatire yakajeka ndiro yekudzivirira pamusoro pechiso kudzivirira iyo polarizer. Iyo yakajeka ndiro yekudzivirira inofanirwa kuve nesimba rakaringana rekudzivirira ekunze masimba.
(4). Radiation mamiriro inofanirwa kutorwa kuti isangane netembiricha yakatarwa
(5). Iyo acetic acid mhando uye klorini mhando zvinhu zvinoshandiswa pabutiro kesi hazvitsanangurike, nekuti iyo yekutanga inogadzira inokanganisa gasi iyo inokanganisa iyo polarizer pakukwirira tembiricha, uye yekupedzisira iyo dunhu inopaza kuburikidza ne electrochemical reaction.
(6). Usashandise girazi, tweezers kana chero chinhu chakaomarara kupfuura iyo HB penzura inotungamira kuti ubate, pusha kana kupukuta iyo yakafumurwa polarizer. Ndokumbirawo usashandise dzidza kuchenesa hembe dzine guruva. Usabata pamusoro pepolarizer nemaoko asina maoko kana jira rakakora.
(7). Pukuta mate kana madonhwe emvura nekukurumidza. Zvinokonzera kushanduka uye kushanduka kana vakabata polarizer kwenguva yakareba.
(8). Usavhure kesi, nekuti dunhu remukati harina simba rakakwana.
3. Maitiro ekuchengetedza
(1). Spike ruzha inokanganisa dunhu kusashanda. Inofanirwa kuve yakaderera pane inotevera voltage: V = ± 200mV (yekuwandisa uye yekusagonesa)
(2). Nguva yekuita inoenderana netembiricha. (Pakutonhora kwakadzika, inokura zvakareba.)
(3). Kupenya kunoenderana netembiricha. (Pakutonhora kwakadzika, inova yakaderera) uye pakuderera kwetembiricha, nguva yekuita (zvinotora kujeka kudzikamisa mushure mekuchinja nguva) inova yakareba.
(4) Ive nekuchengetera kukwirisa kana tembiricha ikangoerekana yachinja. Kufefetedza kunogona kukuvadza iyo polarizer kana yemagetsi kutaurirana. Mushure mekupera, kupaka kana mabara zvichaitika.
(5). Kana imwe patani yakatarwa ikaratidzirwa kwenguva yakareba, mufananidzo unosara unogona kuoneka.
(6). Iyo module ine yakakwira frequency dunhu. Iyo inogadzira sisitimu inokwenenzvera zvinokanganisa magetsi. Nzira dzekudzivirira nekuvharira dzinogona kushandiswa kudzikisira kupindirana kunogona kuve kwakakosha.
4. Electrostatic kubuda kubuda
Iyo module inoumbwa nemagetsi maseketi, uye kubuda kwemagetsi kunogona kukonzera kukuvara. Anoshanda anofanira kupfeka rundarira remagetsi uye nekukuya. Usabate zvakananga mapini pane iyo interface.
5. Matanho ekudzivirira pakurwisa kwakasimba kwechiedza
Kuratidzwa kwechiedza kwakasimba kunokonzeresa kudzikira kwemapolarizer uye mafirita emavara.
6. Kuchengeta kwekufunga
Kana ma module akachengetwa sezvipenga zvikamu kwenguva yakareba, zvinotevera zvinofanirwa kuchengetwa.
(1). Zvichengete munzvimbo ine rima. Usaburitse module muchiedza chezuva kana mwenje we fluorescent. Chengeta 5 - kusvika 35 ℃ pasi peyakajairika mwando tembiricha.
(2). Kumusoro kwepolarizer hakufanirwe kunge kuri kusangana nezvimwe zvinhu. Inokurudzirwa kurongedza paunenge uchitakura.
7. Kuchengetedza kwekubata inodzivirira firimu
(1). Kana iyo firimu inodzivirira yabvarurwa, magetsi emagetsi achagadzirwa pakati pefirimu nepolarizer. Izvi zvinofanirwa kuitwa nemagetsi grounding uye ion kufuridza michina kana munhu wacho zvishoma nezvishoma uye nokungwarira akasvuurwa.
(2). Iyo yekudzivirira firimu ichave nediki diki yeglue yakasungirirwa kune iyo polarizer. Zviri nyore kugara pane iyo polarizer. Ndokumbira ubvise firimu rinodzivirira nokungwarira, usadaro jira remwenje richikwiza.
(3). Kana iyo module ine yekudzivirira firimu inochengetwa kwenguva yakareba, mushure mekudzivirira iyo firimu yabvamburwa, dzimwe nguva kuchine chidiki chidiki kwazvo cheglue pane iyo polarizer.
8. Dzimwe nyaya dzinoda kutariswa
(1). Dzivisa kushandisa zvakanyanya kuwanda module kana kuita chero shanduko kana kugadziridzwa kumo module
(2). Usasiye maburi ekuwedzera pane rakadhindwa redunhu bhodhi, shandura chimiro chayo kana kutsiva zvikamu zveiyo module yeTFT
(3) Usabatanidze iyo TFT module
(4). Usapfuure chiyero chakazara panguva yekushanda
(5). Usadonhedze, kukotama kana kumonyanisa module yeTFT
(6). Kugadziriswa: I / O terminal chete
(7). Kuchengeta: Ndokumbirawo uchengetedze mune anti-static mudziyo kurongedza uye nharaunda yakachena
(8). Zivisa mutengi: ndapota teerera kumutengi kana uchishandisa module, usaise chero tepi pane iyo module zvikamu. Nekuti iyo tepi inogona kubviswa ichaparadza mashandiro anoita zvikamu zvacho uye kukonzera kusagadzikana kwemagetsi mune module.
Kana iyo michina yakarambidzwa uye isingadzivike kunamatira tepi pane zvikamu, pane dzinotevera nzira dzekudzivirira iyi isina kujairika mamiriro:
(8-1) Simba rekunamatira rematepi ekushandisa harifanirwe kunge rakakura kupfuura simba rekunamatira re [3M-600] tepi;
(8-2) Mushure mekuisa tepi, panofanirwa kunge pasina peeling oparesheni;
(8-3) Kana zvichikosha kuti ubudise tepi, zvinokurudzirwa kushandisa nzira yekupisa yekufukura tepi.